दशैंमा ‘छक्कापञ्जा’को सिण्डिकेट तोडिदै,दीपक–दीपालाई छटपटी ! « Janata Samachar
|| July 9, 2018
दशैंमा ‘छक्कापञ्जा’को सिण्डिकेट तोडिदै,दीपक–दीपालाई छटपटी !
प्रकाशित मिति :9July, 2018 4:29 pm
काठमाडौं । हुन त यो वर्षको दशैं आउन अझै तीन महिना भन्दा बढी समय बाँकी छ । तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भने अहिलेदेखि नै दशैंले माहोल तताउन शुरु गरिसकेको छ । दशैं विदालाई लक्षित गरि दुई चलचित्र जय भोले र छक्कापञ्जा ३ ले एकैदिन रिलिज मिति तोकेपछि तातिएको माहोल दुवै चलचित्रका निर्देशकको पछिल्लो अभिव्यक्तिले झनै तातेको छ ।
चलचित्र वितरक कम्पनी डिसीएनसँग आवद्द निर्देशक अशोक शर्माले झण्डै दुई दशकपछि निर्देशन गरेको चलचित्र जय भोलेले निर्माण अघि नै आगामी दशैंमा रिलिज हुने घोषणा गरेको थियो । उता पहिलो चलचित्रदेखि नै हरेक दशैंमा रिलिज गर्दै आएको चलचित्र छक्कापञ्जा टिमले तेस्रो सिक्वेल पनि दशैंकै अवसरमा रिलिज गर्ने घोषणाकासाथ हाल धमाधम छायांकन जारी राखेको छ । जय भोलेले सम्पूर्ण छायांकन सकाएर गीत र टिजर समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर दर्शकहरुको प्रतीक्षाको सूचीमा रहेको दुवै चलचित्रले दशैंको विदालाई रिलिज मिति तय गरेपछि माहोल अहिलेबाटै तातिन शुरु गरेको छ ।
जय भोलेका निर्देशक एवम् निर्माता अशोक शर्मा आफ्नो पूर्व घोषणाबाट पछि हट्ने मुडमा देखिदैनन् । आफूले छक्कापञ्जा ३ भन्दा अगाडिदेखि नै दशैंमा रिलिज गर्ने योजनाकासाथ चलचित्र निर्माण गरेकोले कुनै हालतमा पछि नहट्ने निर्देशक शर्मा बताउछन् । परिआए आफू छक्कापञ्जा ३ सँग भिड्न तयार रहेको उनले बताए । उनले भने–’मैले कुनै फिल्मसँग जुधाउछु भनेर जय भोलको निर्माण गरेको होइन । फेरि एक दुईटा फिल्मसँग जुध्दैमा खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’
‘मैले कुनै फिल्मसँग जुधाउछु भनेर जय भोलको निर्माण गरेको होइन । फेरि एक दुईटा फिल्मसँग जुध्दैमा खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’
उता विगत केही वर्षदेखि सोलो मार्केट क्याप्चर गर्दै आएको छक्कापञ्जा ३ का निर्देशक दीपाश्री निरौला भने यसपटकको दशैं पनि आफ्नै पोल्टामा पार्ने रणनीतिमा रहेकी छिन् । उनी जयभोलेसँग मात्र होइन कुनै नेपाली चलचित्रसँग छक्कापञ्जा ३ जुधाउने योजनामा छैनन् । न त चलचित्रको रिलिज मिति सार्न नै उनी राजी छिन् । जनता समाचारसँगको कुराकानीमा निर्देशक दीपाश्रीले अशोक शर्मा जस्तो दिग्गज निर्देशकले फिल्म नजुधाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको कुटनीतिक प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हरेक वर्षको दशैंमा हामीले फिल्म रिलिज गर्दै आएकाछौं । त्यसैले यसपटक पनि दशैंमा अशोक दाइसँग छलफल गरेर छक्कापञ्जा ३ रिलिज गर्छौं’,दीपाले भनिन् ।
‘हरेक वर्षको दशैंमा हामीले फिल्म रिलिज गर्दै आएकाछौं । त्यसैले यसपटक पनि दशैंमा अशोक दाइसँग छलफल गरेर छक्कापञ्जा ३ रिलिज गर्छौं ।’
विगतमा आफूसँग जुधाउन आएका केही चलचित्रहरुको राइट्स नै किनेर छक्कापञ्जा चलाएका दीपाश्री र दीपकको समूहलाई यसपटक भने मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्मको मुड अनुसार जय भोलेका निर्देशक अशोक शर्मा कुनै पनि हालतमा छक्कापञ्जासँग नझुक्ने मनस्थितिमा छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बेलाबेलामा देखिने यस्ता छक्कापञ्जा अस्वभाविक होइन । तर जुङ्गाको लडाइमा दुवै चलचित्रको दुर्गति नहोस् ।
बाराका एसपीको रहस्यमय मृत्यु, प्रजिअ कोमामा !
काठमाडौं । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सशष्त्र प्रहरी उपरीक्षकको सवारी दुर्घटना रहस्यमय भएको भन्दै
मह र घ्यू बेच्ने बटुवाले बुनेको योजनाः अछाम आक्रमणका १७ वर्ष
मसालका तीन दर्जनबढी राँको ब्यारेकमाथिको अग्लो भागमा राखेर ठिक पछाडिबाट माओवादी सेनाले सरकारी फौजमाथि बमबारी
चलचित्र ‘मारुनी’को शुभमुहुर्त
काठमाडौं । चलचित्र ‘मारुनी’को शुक्रबार शुभमुहुर्त गरिएको छ । फागुन १३ गतेबाट छायांकन प्रारम्भ गर्न
ढोरपाटनमा हिमपातः अत्यधिक चिसाले मरे ५ मृगसहित वन्यजन्तु
विमल खड्का काठमाडौं । अत्यधिक हिमपातका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षमा दुर्लभ वन्यजन्तु मर्न थालेका छन्
मह र घ्यू बेच्ने बटुवाले बुनेको…
मसालका तीन दर्जनबढी राँको ब्यारेकमाथिको अग्लो भागमा राखेर ठिक पछाडिबाट माओवादी सेनाले सरकारी फौजमाथि बमबारी गरे । सरकारी फौज राँको…
२०७५ फागुन ४ गतेको राशिफल
मेष – काममा स्फूर्ति बढ्नेछ , रमाइलोमा दिन बित्नेछ । वृष – खानपिनमा मस्त भइनेछ , धनको सहयोग पाइनेछ । मिथुन–…
१५ लाख भूूूूमिहीनलाई छिट्टै लालपूर्जाः मन्त्री…
सनिउल्ला धोबी कपिलवस्तु । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भुमीहिनले छिट्टै लालपुर्जा पाउने बताउनु भएको छ…
‘सरकारको एक वर्षको उपलब्धी शून्य’
नारायण थापा भक्तपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले सरकारको एक बर्षको उपलब्धी शुन्य भएको बताउनुभएको छ । नेपाली…
दावाको जीउमै भेटियो सुनकाे तावा
अनु आचार्य रसुवा । प्रहरीले चेकजाँच गर्दा एक व्यक्तिको जीउमै आधाकिलो सुन भेटिएको छ । गोसाइकुण्ड गाउँपालिका १ थुमनका दावा छिरिङ…
सरकारले भूकम्पीडितका लागि थप्यो यी ५ सुविधा
आज सार्वजनिक विदा (मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित)
बाबुद्वारा छोरीमाथि लगातार यौनशोषणः पेटमा ८ महिनाको बच्चा
‘पाँचसयमा हल गोरु बेचेर भेट्न गएँ, गोरु मासियो छोरो भेटिएन’
नेविसंघकाे भावी नेतृत्वमा ३२ वर्ष मुनिको महिला ल्याउन माग
‘नारीवाद लैंगिक समानताको खोजी हो, पूर्वाग्रह होइन’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणः ‘कोन गरे ऊँट बैठै अछि’